16-11-2019 | अन्य
धेरै वर्षसम्म हामी मानिसहरु हाम्रो छालालाई विभिन्न सन्देशहरू पठाउन ट्याटू गर्दछौं, र केहि कलाको वास्तविक कार्यहरू हुन्। हामी तीन आयामहरूमा सबै भन्दा राम्रो समीक्षा गर्छौं।
Arm००० वर्ष पुरानो म्यान मन्दिरको टुक्रा हुन सक्ने एउटा बाहुमा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व।
आन्तरिक शरीर रचना
यस ट्याटुले हामीलाई मानव शरीरको भित्री प्रतिनिधित्व दिन्छ। तल्लो भागमा हामी सबैभन्दा प्राकृतिक प्रवृत्ति र तिनीहरूको शक्ति देख्न सक्छौं, जबकि माथिल्लो भागमा हामी सबैभन्दा काल्पनिक र भावनात्मक क्षेत्र देख्छौं।
त्यहाँ धेरै कृत्रिम व्यक्तिहरू छन् तर कोही जसले कपडा लगाउँदछन् उनीहरूको आन्तरिक भागका धातु भागहरू यस साइबोर्ग केटीले गरे जस्तै।
यदि तपाईं यो धडमा धेरै हेर्नुहुन्छ तपाईं परिमाण परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ वा समयमा हराउनुहुनेछ।
यस ट्याटूको अविश्वसनीय विवरणले हामीलाई एक दृश्य छोड्दछ जहाँ एक व्यक्ति शून्यमा हाम फाल्नेवाला छ। ग्रेडियन्टहरू वास्तविक गहिराइ प्राप्त गर्न पूर्ण रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
यो मान्छेले हामीलाई उसको पेटमा बटनहरू प्रयोग गरेर हिम्मत देखाउँदै छ। के तपाईंसँग सम्पूर्ण शरीर बटनहरूको साथ हुन्छ?
यो केटी सबै अवसरहरूमा सेक्सी हुन चाहन्छ र उनको लीग गुमाउनबाट जोगिन उनी आफ्नो छालामा ट्याटू हुन्छिन। तपाईंले एक भन्दा बढि व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्छ कि तपाईं त्यसलाई त्यहाँबाट हटाउने प्रयास गर्नुहुन्न, जुन स्थायी हो।
यस महिलाले हामीलाई उनको भित्र पशु देखाउँदछन्। हड्डी, मासु र रगतको विवरणले यस ट्याटुलाई सबैभन्दा भयrif्कर र प्रभावशाली बनाउँदछ।
दुई भन्दा पाँच राम्रो
यस महिलाले सोचेको हुनुपर्छ कि दुईवटा आँखा दुई भन्दा राम्रो देखिन्छ किनकि उनको अनुहार रंगाउने निर्णय असम्भव छ। जे भए पनि, प्रत्येक आँखाको विवरण र विस्तारित मुखले छोडेको अभिव्यक्ति प्रभावशाली छ।
यस ट्याटुले छाला हटाउने चाहना बढाउँदछ र तल नक्शा हेर्नुहोस्। छायाको साथ काम साँच्चै आश्चर्यजनक छ। के त्यहाँ कुनै गोप्य खजाना हुनेछ?
अहिले सम्म हामीले भेट्टाएका तीन आयाममा सबै भन्दा राम्रो ट्याटूहरूको समीक्षा। यसले यो स्पष्ट पार्दछ कि हाम्रो छालामा धेरै चीजहरू छन् र तिनीहरूमध्ये र paintमा उत्कृष्ट क्यानभास छ।